चर्चित गित "सुन साईली" लाई जवाफ दिदै आयो अर्को साईलाको गित — KhabarTweet::Nepali online news portal चर्चित गित "सुन साईली" लाई जवाफ दिदै आयो अर्को साईलाको गित — KhabarTweet
गीतकार सुष्मा रुपाबुङ राई को शब्द डी.आर. अटूको संगीत र सुनिता थेगिमको आवाजमा साइली गीत को मनछुने जवाफ गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक हेमन्त रानाको गीत ‘साइली’ ले सम्पूर्ण नेपालीको मन मुटु छोयो र धेरैलाई भावुक पनि बनायो । फलस्वरूप गीत चर्चित बन्यो, बिशेष गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई यो गीतले सिधै प्रभाव जमायो कतिलाई त रुवायो पनि । युट्युबमा यसरी भाईरल भयोकी लाइक कमेन्ट र भ्युयर्सको बाढि नै आयो र आइरहेको छ । फेसबुक र अरु सामाजिक सन्जालहरुमा भुकम्पिय तरंगनै ल्याइदियो । सबै उमेरका स्रोताले मन पराएको शायद यो नै पहिलो गीत र भिडियो हुन् सक्छ । गुणस्तरीय छ भने नेपाली गीत संगीत पनि रातारात भाईरल बन्न सक्छ र सम्भाबना छ भन्ने कुरा यो गीतले पुश्टि गरेको छ ।
यती मिठो ,कारुणिक,उत्कृष्ट गीत साईलीले जवाफी गीत जन्माइरहेको छ । धेरैले रफ भए पनि सुन साइलीको जवाफ भन्दै गीत हरु सामाजिक संजालमा अपलोड गरिरहेका छन् । यद्यपी ति अनौपचारिकरुपमा आएका जवाफहरु हुन् । तर जवाफि गितहरु आउने क्रममा एउटा जवाफ औपचारिक रुपमै आएको छ जुन गीतमा धेरै ठुलो लगानी समेत देखिएको छ । संभवत हेमन्त रानाको सुन साइलीमा भन्दा धेरै लगानी गरेर गीतकार सुष्मा रुपाबुङ राई ले एउटा लिरिकल भिडियो बजारमा ल्याएकी हुन् । यति चर्चित गीतको जवाफ गीत तयार पर्नु एउटा चुनौती हो । भनिन्छ ‘ इँटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ’ त्यस्तै यो उत्कृष्ट गितको जवाफ चानचुने दियर हुँदैन । मामुली जवाफ दिदा यो गितको अबमुल्यन हुनेछ । सुश्मा रुपाबुङ्ले यही गितको जवाफ दिने हिम्मत गरेकी छिन् । साइली गितलाइ जवाफ दियर कतिको न्याय दियकी छिन् त्यसको मुल्यांङकन गर्ने जिम्मा भने तपाईं हाम्रै हो । गीतलाई चर्चित संगितकार डी.आर. अटू ले संगीत दिएका हुन् भने आवाज भरेकी छिन मिठो स्वरकी धनी गायिका सुनिता थेगिम सुब्बा ले । काठमाडौँ स्थित ओपल स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको उक्त गीतलाई राजु कार्की ले एरेन्ज गरेका हुन् भने रमेश संग्रौला ले लिरिकल भिडियो तयार परेका हुन् । यस गीतको फिचर भिडियो पनि छिट्टै निर्माण हुने गीतकार रुपाबुङ राईले बताएकी छिन ।